FAQ-NANTONG GAOYA Steel mamiriro CO., LTD.
Muri gadzira fekitari kana kutengesa kambani?
Tiri fekitari gadzira. Muri nokugashirwa kutishanyira chero nguva. In mumusangano,ine zvakakwana yemhando michina marongedzero kuita simbi zvivako uye ukomba. Saka tinogona nechokwadi unhu hwakanaka uyewo zvemakwikwi mutengo.
Sezvo vachipinda pamusika dzakawanda, tava vadyidzani vakawanda wokumwe zvokutengeserana companies.Partner vaIsiraeri vakati,"Tikasarudza mutengo uye unhu iwe kwete chete nokuda,asiwo wako basa uye nomwoyo vakakodzera kuva shamwari yangu akavimbika. "
Zvakadini nounhu hwako kudzora?
Chekutanga,zvigadzirwa edu vakapfuura CE EN1090 uye ISO9001:2008,izvo zvinoreva zvinhu zvedu vaedzwa ne wechitatu party.And asati muchivigiro kugadzirwa,vose yakatsvuka zvinhu zvinofanira kuedzwawo advance.During kugadzirwa,tine dzinotevedzana kugadzira indekisi magwaro, Vashandi vari chinozoiswa maererano nemitemo uye rinotungamirirwa yepamusoro kudzora personnel.After kugadzirwa,tine mainjiniya kuongorora unhu uye tora mutoro ichi.
How kuti mazwi kubva kwamuri?
Munokwanisa kutirovera runhare chero nguva nenzira Email, WhatsApp, Skype uye zvimwe nzira,tipeiwo mamwe mashoko anokosha,akadai dzakananga kukura chivakwa,kukura uye uwandu kwemisha mahwindo,Mashoko muchida kushandisa masvingo roof.After kuti,tinogona kukupa anofungidzirwa mutengo 30 minute.If unofanira kuziva zvakawanda,ngationei kurukura zvakawanda.
Unogona kupa patani basa?
Ehe,tine injiniya chikwata uye anogona kugadzira maererano dzenyu requirements.Architectural mufanidzo imi,mamiriro dhayagiramu,kugadzira yksityiskohta mufanidzo uye kugadzwa mufanidzo vachaitwa uye regai iwe zvinoratidza akasiyana nguva chirongwa.
Chii nguva pakukurukura?
Kukurukura nguva zvinoenderana noukuru uye nhamba yemabhuku building.Generally mukati 30 mushure mekugamuchira payment.And haasaruri zvacho mazuva ishandiswe guru murayiro.
Ko iwe kupa basa kugadzwa?
Yes.We uyewo vane chikwata chokugadza abroad.Firstly,kugadzwa vanodhirowa achapiwa nenhumbi kusvika kunzvimbo port.If uchida,tinogona kuronga mainjiniya kuita murayiridzo racho site.For guru rokuvaka uye vatengi 'zvinodiwa,tinogona kupa basa rose chikwata.
Chii muripo izwi?
30% dhipoziti uye 70% nengaidzo pamberi ainge atumirwa.